Inguqulo 0.2.6 – Regressions buyahamba
June 17, 2009 by okunikezwayo 2 Amazwana
Ungase uphawule kwakungekho isimemezelo mayelana 0.2.5. Isizathu ukuthi yayilula kakhulu impela njengoba lokuqala nokushiywa bug kwatholakala ngaphambi sakwazi sokubhala isimemezelo. Labo version ezimbili okuhloswe ukuba silungise inkinga anayo url ezikhundleni eyenzekayo ulimi ezahlukene futhi sethemba ukuthi 0.2.6 ibethelwe ukuthi. Sithanda ukubonga bonke labo ababika izimbungulu futhi wasiza nge testing. Futhi sethemba sizoba kancane futhi kancane of labo okusheshayo fix releases esikhathini esizayo.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: bugfix, plugin wordpress